🥇 Service desk ဝယ်ပါ။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 4.9. အဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်: 931
ဝန်ဆောင်မှု အရောင်းခုံ၏ ဗီဒီယို
Service desk ကိုဝယ်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုစားပွဲဝယ်ရန် သင်သည် အချိန်အကြာကြီးနှင့် ဂရုတစိုက်ဖြင့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပြီး တပ်ဆင်မှုအတွက် ပါရဂူတစ်ဦးရောက်ရှိလာခြင်းကို စောင့်မျှော်နေပါသလား။ ဒီလိုမျိုး ဘာမှ မဖြစ်ဘူး!
USU Software စနစ်ကုမ္ပဏီသည် ဖြစ်နိုင်သမျှ အတိုဆုံးအချိန်အတွင်း အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို သင့်အား ပေးဆောင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ တပ်ဆင်မှုအဆင့်များအားလုံးသည် သင့်အား အချိန်နှင့် အားစိုက်ထုတ်မှုကို သက်သာစေသော အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို လျင်မြန်ထိရောက်စွာ ထည့်သွင်းသည်။ ၎င်းကိုဝယ်ပြီး စံပြစာရင်းကိုင်နှင့် ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။ ၎င်းသည် ပြဿနာများစွာကို ဖြေရှင်းရန် ဘက်စုံသုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအားသာချက်မှာ multiplayer mode တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုစားပွဲခုံကို တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် သင်သည် သင့်ဝန်ထမ်းများအားလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တစ်ရှိန်ထိုး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အပလီကေးရှင်းသည် အင်တာနက် သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းကွန်ရက်များပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ လုပ်ငန်းတွင်းရှိ ကွန်ပျူတာအားလုံးကို အဆောက်အဦတစ်ခုတည်းတွင် စုစည်းထားလျှင် ဒုတိယရွေးချယ်မှုကို အသုံးပြုရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အင်တာနက်၏အကူအညီဖြင့်၊ သင်သည် အဝေးမှအရာဝတ္ထုများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အဝေးမှပင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတိုင်းသည် ပရိုဂရမ်တွင် သီးခြားစီ စာရင်းသွင်းသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤအစီအမံများကြောင့် သင်သည် အလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်ရန် အခွင့်အလမ်းကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ ဝင်ရောက်ခွင့် အခွင့်အရေးများသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်တာဝန်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့် မန်နေဂျာနှင့် သူ့အနီးနားရှိ လူအများအပြားသည် စားပွဲတင်အပလီကေးရှင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်အစုံကို မြင်ပြီး ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုပါ။ သာမန်ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ စားပွဲအာဏာပိုင်လုပ်ကွက်များ၏ ဧရိယာအတွင်း တိုက်ရိုက်ပါဝင်မှသာ လုပ်ကိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုစားပွဲမီနူးတွင် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါရှိသည် - မော်ဂျူးများ၊ ရည်ညွှန်းစာအုပ်များနှင့် အစီရင်ခံစာများ။ နောက်ထပ်လုပ်ငန်းမစခင် ရည်ညွှန်းစာအုပ်တွေကို ဖြည့်စွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ မစိုးရိမ်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည် တစ်ကြိမ်တည်းသာ လုပ်ဆောင်ပြီး နောင်တွင်၊ ထပ်ခါတလဲလဲ အလုပ်စားပွဲအများအပြား၏ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုကို အာမခံပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဝန်ထမ်းစာရင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည့် စာရင်းကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်၊ တောင်းဆိုချက်အသစ်များကို ဖန်တီးသည့်အခါ ၎င်းတို့ကို ထပ်ပွားခြင်းမပြုပါ - စနစ်သည် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် အစားထိုးပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကိုးကားမှုအပိုင်းသည် သင်၏နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုများ ဆက်တင်များကို အတိအကျထိန်းချုပ်ထားသော အာရုံစိုက်မှုဖြစ်သည်။ အခြေခံတွက်ချက်မှုများကို module များတွင်လုပ်ဆောင်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုကို ဤနေရာတွင် အလိုအလျောက် ဖန်တီးပြီး အင်စတီကျူးရှင်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံး၏ မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ ယင်းအတွက် အချိန်ပိုတစ်မိနစ်ကို မဖြုန်းတီးစေရန်၊ ဆက်စပ်ရှာဖွေမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ? ဝင်းဒိုး၏ထိပ်တွင်၊ သင်သည် client ၏အမည် သို့မဟုတ် သင်ရှာဖွေနေသောဖိုင်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်သည့် အထူးဝင်းဒိုးတစ်ခုရှိသည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ပရိုဂရမ်သည် ဒေတာဘေ့စ်ရှိ ကိုက်ညီမှုစာရင်းကို ပြသပြီး သင်အလိုရှိသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ရန်သာ လိုအပ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် ရုံးဖော်မတ်အများစုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် စာရွက်စာတမ်းစီးဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ထို့အပြင်၊ အသေးစိတ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဤနေရာတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ပြီး ရလဒ်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ အမျိုးမျိုးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ၎င်းတို့ကို သင့်လျော်သောအမည်ဖြင့် နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဤအစီရင်ခံစာများကိုအခြေခံ၍ သင်အလိုရှိသောရလဒ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရှိနိုင်သည်။ အခြေခံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပြင်၊ မှာယူရန်အတွက် ထပ်ဆောင်းလုပ်ကွက်များကို သင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် 'ခေတ်သစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ကျမ်းစာ' သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းဖလှယ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုစားပွဲတစ်လုံးဝယ်ခြင်းသည် အောင်မြင်မှု၏ ပထမခြေလှမ်းသာဖြစ်သည်။ ကျန်တာကို ပိုက်ဆံပိုမသုံးဘဲ အဲဒါကို ကူညီပေးတယ်။
တူညီသောနယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသူများ၏ကျွမ်းကျင်မှုကွာခြားချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ပေါ့ပါးသောမျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤ setup သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များနှင့် အစပြုသူများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ အပလီကေးရှင်းတွင် အကန့်အသတ်မရှိ အသံအတိုးအကျယ်ဖြင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် virtual storage ပါရှိသည်။ ဒီလိုဆော့ဖ်ဝဲလ်ဝယ်ဖို့ ရုံးကထွက်ဖို့တောင် မလိုပါဘူး။ တင်ပြထားသော ဝန်ဆောင်မှုစားပွဲသည် အရှုပ်ထွေးဆုံးသော အခြေခံအဆောက်အဦများကိုပင် ရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များက ဝယ်ယူနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူတစ်ဦးစီ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ မဖြစ်မနေ မှတ်ပုံတင်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ အချိန်အများကြီးမယူဘဲ လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံပေးသည်။ ဝန်ဆောင်မှုစားပွဲခုံတစ်လုံးကို ဝယ်ယူပြီးနောက်၊ လုပ်ငန်းတစ်ခု၏အကြီးအကဲသည် စံပြစာရင်းကိုင်နှင့် ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာတစ်ခုကို သူ့စိတ်ကြိုက်ရရှိသည်။ အရန်သိမ်းဆည်းမှုသည် ကြိုမမြင်နိုင်သော အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းကို ဖျက်ခဲ့တာလား။ အရေးမကြီးပါဘူး၊ ပြန်ယူရုံပါပဲ။ အရန်သိမ်းခြင်းနှင့် အခြားပရိုဂရမ်လုပ်ဆောင်မှုများ အချိန်ဇယားကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည်။ အထူးလုပ်ဆောင်စရာ အစီအစဉ်ဆွဲသည့် လုပ်ဆောင်ချက် ရှိပါသည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် စီမံဆောင်ရွက်နေသော ဝန်ထမ်းများအား ပေးအပ်ထားသော အချက်အလက်များကို ထိန်းညှိပေးသည်။ အချို့သော အလုပ်များကို ပြီးမြောက်ရန် အရေးတကြီး ထိန်းညှိပါ။ တစ်ခုတည်းသောအခြေစိုက်စခန်းဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်ဝေးလံခေါင်သီသောအကိုင်းအခက်များအကြားအဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ရေး။ သင့်ပရောဂျက်အတွက် နောက်ထပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများထည့်ရန် ဝန်ဆောင်မှုစားပွဲတင်အင်္ဂါရပ်များကို သင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ မိုဘိုင်းအက်ပ်များသည် ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူများကို ပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် တူညီသော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် မတူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ တယ်လီဖုန်းဖလှယ်မှုများဖြင့် ပေါင်းစည်းမှုပုံစံဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် မည်သည့်စာရင်းသွင်းသူနှင့်မဆို ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။ သုံးစွဲသူစျေးကွက်သို့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်စာပို့ခြင်းသည် လူများစွာကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ကွင်းဆက်ထဲတွင်ရှိနေစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ အပလီကေးရှင်း၏သရုပ်ပြဗားရှင်းကို လူတိုင်းအတွက် ရနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ပြည့်စုံသော အဖြေများကို ကျိန်းသေပေးပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို အလိုအလျောက်စနစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဟုခေါ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုစည်းကမ်းအသစ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော နိဒါန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ရရှိကာ အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့် စတော့ဈေးကွက်တွင် မကြုံစဖူးတိုးတက်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။